Healthy Lifestyle – စာမကျြနှာ2– Healthy Life Journal
———၊ ငွေစင်ကြယ်ယံ ၊——— အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတဲ့ သူတွေဟာ အိမ်မှာသာယာပျော်မွေ့မှုမရှိဘဲ အမြဲထွက်ပေါက်ရှာလေ့ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပြီး သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေကတော့ အသက်ကြီးရင့်တဲ့အထိ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စနောက်ရင်း ချစ်ကြည်နူးစွာ ဖြတ်သန်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ သူတို့တွေ သာယာခိုင်မြဲတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးပိုင်ဆိုင်ရတာ ဘာကြောင့်လဲ။ ဒါကို သိချင်ကြသူတွေအတွက်...
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားသည်။ ၊—– Q. လေခဏခဏလည်တာက အူမကြီးနဲ့ ဆိုင်ပါသလား။ ဘာကြောင့်ပါလဲ ဆရာ။ A. လေခဏခဏလည်တာက အူမကြီးနဲ့ ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ အူမကြီးမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေက ကိုယ်စားလိုက်တဲ့အစာတွေ ချေဖျက်ရင်းနဲ့ ထွက်လာတဲ့ gas တွေကို...
အရွယ်ရင့်စေနိုင်သဖြင့် အသိ၊ သတိဖြင့် ဆင်ခြင်စားသောက်သင့်သည့် အစားအသောက် ၁၀ မျိုး
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကိုယ်စားသောက်တဲ့အတိုင်း ကိုယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ ကိုယ်နေ့စဉ် စားသောက်တဲ့ အစားအသောက်တွေက အသားအရေအပေါ် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သကြား၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အဆီ၊ ဆား အလွန်အမင်းထည့်စားတာ၊ အယ်လ်ကိုဟောနဲ့ ကဖင်းဓာတ်တွေက အရေးကြီး ပရိုတင်းတွေကို...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါက ကျွန်မတို့ရဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံနဲ့ ဆက်စပ်သလို မျိုးရိုးလိုက်တာနဲ့လည်း ဆက်နွှယ်မှုရှိပါတယ်။ မျိုးရိုးကိုတော့ ရှောင်လွှဲလို့မရပေမယ့် နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကိုတော့ ကျွန်မတို့ ပြုပြင်နေထိုင်လို့ ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အဓိကပြောချင်တာက အခုခေတ်မှာ လူကြီးတွေသာမက လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းတွေမှာတောင်...
သက်ရှည်ကျန်းမာဖို့ရာ စားသင့်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေရဲ့ ထူးထူးခြားခြားဂုဏ်သတ္တိ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့ အစားအသောက်တွေက သက်ရှည်ကျန်းမာရေးအတွက် တကယ်ပဲ အထောက်အကူပြုရဲ့လား၊ သင့်မှာ ဘယ်လိုကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ခံစားနေရလို့ ဘယ်လိုအာဟာရဓာတ်တွေကို ပိုမိုဖြည့်တင်းပေးဖို့ လိုအပ်နေသလဲ စတဲ့ အကြောင်းတွေကို သိစေဖို့ အာဟာရဓာတ်တွေရဲ့ ထူးခြားဂုဏ်သတ္တိတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။ အသက်ရှည်စေရန်အတွက်...
ကျန်းမာပြီး ရောဂါဘယကင်းဝေးစေမည့် နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာဟာ လာဘ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်လို့ ကျန်းမာမှ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်တင့်မျှတတဲ့ အစာအာဟာရတွေမှီဝဲတာ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိတာနဲ့ ရောဂါဘယတွေ ကင်းဝေးအောင် ပြုမှုနေထိုင်တာတို့ လိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။ ရောဂါတွေကို ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါနဲ့ မကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲပါတယ်။...